Free Download ZingPlay Game Portal – Shan – Board Card Games Android Apk – LiteApk
Free Download ZingPlay Game Portal – Shan – Board Card Games Android Apk
10.0	(944)Board, Gamesby VNG GAME STUDIOS
Zingplay Game Portal ဆိုသည်မှာကစားသူများ လိုအပ်သော ပြည်တွင်ဂိမ်းတွေနှင့် နိုင်ငံတကာဂိမ်းများ ပါဝင်သော ဂိမ်းကောင်းများစုဝေးနေသည်။ Zingplay Game Portal သည် မိုဘိုင်းပေါ်တွင် အလွန်ပေါ့ပါးပြီး လိုချင်တဲ့ ဂိမ်းကို ဒေါင်းနိုင် ပါတယ်။ Application လေးတစ်ခုရှိရုံနဲ့ သင် အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါပြီ
ပျော်ရွှင်စေမည့် Board games များအကြောင်း
Zingplay Game Portal တွင် Board Game များလည်းပါဝင်ပေါင်းစည်းနေပါသည်။ မိုနိုပိုလီ ဇင်ပလေး၊ ဗျုဟာဂိမ်းများ Chaos Age၊ အာကစားဂိမ်း “Pool Billiard Zingpaly” အရှေ့တောင်အာရှ အကောင်းဆုံးဂ်ိမ်း “Ludo Zingplay” နှင့် ရိုးရာ ဂိမ်း “Carrom Zingplay”
လူကြိုက်အများဆုံး ဂိမ်းတွေထဲက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ခရီးသွားဂိမ်းတခုကို ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့သားများက ပြန်လည်မွမ်းမံဖန်တီးထားပါတယ်။ မိမိ မြို့ကိုတည်ဆောက်ဖို့ နည်းဗျူဟာတွေလိုအပ်ပါတယ်။ လျင်မြန်ပါးနပ်ဖို့လဲ လိုပါမယ်။ အခြား ကစားသမားအစစ်တွေနဲ့လည်း အတူဆော့ကစားနိုင်တော့ ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ မိုနိုပိုလီ Zingplay ဟာဆိုရင် ဘော်ဘော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ခရီးသွားဂိမ်းတခုပါပဲ။
Chaos Age – တိုက်ပွဲဘုရင် Zingplay
Chaos Age – တိုက်ပွဲဘုရင် Zingplay နည်းဗျူဟာသုံး မိုဘိုင်းဂိမ်းဟာ ဗီယက်နမ် Android အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ လွယ်ကူစွာ ကစားလို့ရတဲ့ ဂိမ်းဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားပြီး ကစားသမားတိုင်း ကိုယ့်အမိမြေမှာ ဘုရင်တစ်ဆူဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ရုံသာမက ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ clan တွေမှာလဲ ပါဝင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုအပြည့်အ၀ပေးနိုင်မယ့် ဂိမ်းပါပဲ။ မိုဘိုင်းဗားရှင်း ဘိလိယက်ဂိမ်းတွေ အများကြီးထဲက ဘိလိယက်အွန်လိုင်းဂိမ်း Zingplay ဟာ ကစားသူတွေကို အပြင်လက်တွေ့မှာ ကစားနေရသလိုမျိုး စိတ်ခံစားချက်တွေပေးမှာပါ။ လုံးဝ လက်မလွှတ်တမ်း ဆော့ကစားသင့်ပါတယ်။ ဘိလိယက်အွန်လိုင်းဂိမ်း Zingplay – လက်တွေ့ပြင်ပက ကစားသမားအစစ်တွေ စောင့်နေပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးသော အကောင်းဆုံး ကလေးဘ၀ဂိမ်းကို မိုဘိုင်းပေါ်တွင် လူတိုင်းနှင့်ကစားနိုင်ပါပြီ။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီဇိုင်း ကစားနည်း များဇယ်သီးများ သည် သင့်ကို အပျော်တွေခေါ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်၊ သူငယ်ချင်းအသစ် တွေ နှင့်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော Simulation ကတ်ဂိမ်းများအကြောင်း
Poker Zingplay, Dummy Zingplay နှင့် Nine Zingplay သည်နိုင်ငံတကာ ကတ်ဂိမ်းများဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှတွင် လည်း ကစားသူအများအပြားရှိပါသည်။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော ကစားသမားများသည် Zingplay Game Portal နှင့် ကစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူတွေအနေနဲ့ အနိုင်ရဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့ ချဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိတာတွေကို တခါတည်းအကုန် မကစားမိစေနဲ့ဦးနော်!
စတိုးတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးထိပ်တန်း ဂိမ်းတခုဖြစ်ပါသည်။ လှပကောင်းမွန်သပ်ရပ်လှတဲ့အသွင်အပြင်တွေ ချောမွေ့တဲ့ စနစ်တွေကြောင့် ရှမ်းကိုးမီး ဇင်ပလေးသည် မြန်မာတို့ ကစားကိုကစားသင့်သော မိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်း Simulator ကတ်ဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းသည် လူအများကြားရေပန်အစားဆုံး ဂိမ်း ဖြစ်ပါသည်။ စ်ိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး အသွင်အပြင်ဖြင့် ကစားသမားကောင်းများကို ချိတ်ဆက်ပေး နေပါတယ်။ အခုသင်၏ အားလပ်ချိန်တွေမှာ အချိန်တိုင်းကစားပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ပါပြီ
အကူအညီများရယူရန် Zingplay ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများထံကို အောက်ဖော်ပြပါများမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးစေလိုပါတယ်။
The Zingplay Game Portal Players need good games and international games featuring ဂိမျး in the assembly. Zingplay Game Portal on the mobile is very lightweight and can download the desired game. Preliminary Application and you can now enjoy anytime, everywhere
Board games may be happy about
Zingplay Game Portal Board Game are also involved in integration. Monopoly ဇင် child ဗြုဟာ Games Chaos Age, Edge inspire Game “Pool Billiard Zingpaly” Asia Best Hagueိမျး “Ludo Zingplay” folk game “Carrom Zingplay”
One of the most popular gamesamore interesting tour game, our team has been renovated to create. We needastrategy to build the city. I’ll need to be quick and clever. True of other players also good to be able to play with more excitement. The supervisor Monopoly Zingplay ဘျောဘျော best foratravel game.
Battle Chaos Age – King Zingplay
Battle Chaos Age – King Zingplay strategy mobile game Vietnam Android community0had been considered the most unfair. The game can be played easily wrong. Hear relevant language and popular players in their homeland, King not only to show that it is one The international community0Divisional can joinaclan.
Full of emotion0upcoming game. The mobile Billiards games Billiards Zingplay result of the many players like to play on the ground in addition to those who will emotions. They should play and not let go over at all. Billiards outside Zingplay – practical result isatrue player.
The first child0to have been able to play with everyone on the mobile game. The good ဇိုငျး pixel bets will bring you အပြျောတှေ Will be able to play with new friends
Exciting Simulation Card Games
Poker Zingplay, Dummy Zingplay Nine Zingplay international range of card games played in Southeast Asia. Players now Myanmar Zingplay Game Portal Play. Players need to move toward the right decisions to win the process. I had to completely eliminate once and my play!
Dozens Shan baccarat Play
Store isatop of the most exciting games. Playabeautiful and neat appearance forasmooth systems play baccarat dozens child Myanmar Shan မို mobile game play.
Best domestic Simulator card game. This game is the hottest game between peoples.ိတျ movement to connectagood player with the best appearance. Now, in your spare time can enjoy eating it all the time,
Zingplay officials to obtain assistance through the following contact ပေးစလေိုပါတယျ.
Rating 10.0	( 944 )
Tags: ZingPlay Game Portal - Shan - Board Card Games, ZingPlay Game Portal - Shan - Board Card Games 1.0.3, ZingPlay Game Portal - Shan - Board Card Games Android Apk
GODLIKE Blue Marble M 1.1.1.1
Poweramp Music Player (Trial) v3-build-820-play